IiHolo ezinkulu zeSondo zoDlwengulo- Thenga iMega ezinkulu iiTits zoSondo ngesondo- i-Urdolls
Wamkelekile ukuthenga i-boobs enkulu yesini
The Oonodoli bezesondo abakhulu beBoobs sithengisa ukubamba okufanayo kunye namabele amabhinqa okwenene, okukuvumela ukuba ufumane izibonelelo ze-Huge breasted lover kwaye ufuna ukulala ngesondo kunye noonodoli be-Huge Boobs ngobusuku obungenakubalwa. Ngaba uyawafuna amabele amakhulu kakhulu, amabele atyebileyo nathambileyo, oonodoli abakhulu besini esinenyani banokwanelisa umnqweno wakho wokuncancisa kunye ne-Huge Boobs.
I-Zaylee Platinum Silicone (PS) Oonodoli bezesondo bayathengiswa i-E-Cup yoMzimba weSilicone yezoNyango 170CM .
I-Mina Platinum Silicone (PS) Unodoli wokwenyani we-E-Cup Wengqolowa Umbala weSilicone yezoNyango
Super Plump amabele amakhulu iSex unodoli othengiswayo
Ngaba udla ngokuphupha ukuba nomfazi omkhulu wamabele? Amaxesha angenakubalwa afuna ukuba neentlobano zesini nomfazi onebele elikhulu? Ukuba kunjalo, ungayifumana oonodoli abakhulu besondo bebele ufuna apha. Konke Oonodoli baseJapan apha unesifuba esikhulu kakhulu, isifuba esigcweleyo nesithambileyo, sikunika isifuba sokwenene. Oonodoli abakhulu bokwenyani banokuzalisekisa umnqweno wakho wokuncancisa.
Yintoni eyenza unodoli wesondo omkhulu azive eyinyani?
ezi amabhontsi amakhulu oonodoli besini zenziwe-uku-odola malunga nesakhelo se-alloy esixhasayo, esivumela ukuba zibekwe kwiindawo ezininzi zokuzonwabisa. Ukuya kuthi ga kwimingxuma emithathu yolonwabo enqamlezileyo, izinto ezinokwenzeka ziphantse zingapheli. Oonodoli abakhulu besini zibunjwe zijikeleze isakhelo sangaphakathi esiqinileyo kodwa esithambileyo, esikwaziyo ukuxhasa uninzi lwazo kwiindawo ezininzi zesini. Kukho imodeli ehambelana ngokufanelekileyo, phakathi kwe Unodoli weIrontech,Iidola zeWM kunye nemathiriyeli aba nodoli bangena.Ukuba akukho nto uyifunayo ngaphandle kokudlala ngeebhulu ezinkulu, iinketho zoonodoli besini ziyinyani, kwaye ziyamangalisa. Sifuna ukwanelisa inkanuko yakho ye-bust enkulu, kwaye asithethi nje nge-titties - uya kube ukhupha imithwalo kunodoli wakho omkhulu wesondo ngokukhawuleza. Naluphi na uhlobo lwe-sexy, i-kinky yokuzonwabisa onokuyiphupha ngayo, unodoli wakho omkhulu wesondo we-tit ulungele kwaye uzimisele ukuhamba kunye nokukhwela! Ngaphaya koko, umhlobo wakho omkhulu osebeleni ukhona ukuze abambene kunye nobuqabane.